Hiran State - News: HS:- Waa maamul noocee ah Dooxada Shabelle, taageere intee la og ayuuna ku heystaa Hiiraan?
HS:- Waa maamul noocee ah Dooxada Shabelle, taageere intee la og ayuuna ku heystaa Hiiraan?
Dad badan ayaa laga yaabaa iney mudo sanad ah maqlayeen Dooxada shabelle, sidoo kale dad badan ayaa laga yaabaa iney maqlayaan maamulka Dooxada Shabelle ayaa dagaal ka wada Hiiraan iyo maamulka Dooxada Shabelle ayaa ku sugan magaalada Belet Weyne iyo wax la mid ah.
Hadaba tan iyo markii ay kooxda Shabaab kala wareegeen magaalada Belet Weyne xoogaga Hiiraan waxaanu u guur kalnay bal Dooxda Shabelle waxa ay ka dhigan tahay iyo hadafkooda siyaasadeed heerka uu gaarsiisan yahay iyo waliba mustaqbalka iney yahiin maamul reer Hiiraan mideyn kara kadibna Soomaaliweyn reer Hiiraan ku xiri kara.
Qaabkii lagu aas aasay Dooxada Shabelle iyo ujeeadii ka danbeysay.
Dooxada Shabelle kuma imaan talo reer Hiiraan ujeedadii ugu weyneyd ee loo aas aasayna waxey uun aheyd in lagu carqaladeeyo Hiiraan State iyadoo dhismaheeda ay kaalinweyn ku lahaayeen qaar ka mid ah hogaanka sare ee TFGda, walow ay markii danbe hogaanka Dooxada Shabelle looga baxay balan qaadyo loo sameyey markii ay ku dhawaaqeen kadib maadama maamulkii loogu talo galay in lagu carqaladeeyo ee Hiiraan State iyo Dooxaduba loo arkey isku si.
Markii looga baxay balamadii ayna arkeen in ay iska xomeeyeen dad walaalahood ah oo uun wax iney dhistan ku haminayey meel ay arinta kaka laabtaane aysan jirin ayey go,aansadeen iney qaab kale u maareeyaan noloshooda iyagoona bar kontarool ah ka sameystay Tuulada Jawiil halkaasina ka heli jiray dhaqaalo fara badan.
Hadaba ciidamada Hiiraan ma Dooxadaa iyo mahan waqti kuma lumineyno dagaalka qeyb bey ka ahaayeen Hiiraan lagu xoreeyey, ha yeeshee halgan kasta taariikhdiisa ayuu leeyahay Dooxada Shabelle markii ay Hiiraan galeen ilaa maanta ma yahiin koox leh hadaf siyaasadeed oo kasban karta waxgaradka, aqoonyahanada, culimada, siyaasiyiinta reer Hiiraan iyagoo ka bilaabaya beesha uu ka soo jeedo madaxa Dooxada Shabelle?
Xaqiiqadii waxaan la dafari karin iney soo halgameen laakinse Dooxada Shabelle ma ahan koox amaba maamul awood u leh iney hogaamiyaan reer Hiiraan xitaa hadii loo tanaasulo,meelaha ay ka hadlayaan iyo hamiga ku jiro ma dhaafsiisno in magaalada meesha laga soo galo iyo meesha looga baxo ay jidkooyo lacag lagu qaado dhigtaan cidii ka hor timaadana ay madaxa jabiyaan, waliba hada howshaas wey bilaabi lahaayeene wax badan ayaa ka hor taagan oo aanu warbixinadeena danbe ku soo qadan doono.
Hadaanu kala qaadno madax Dooxada Shabelle iyo dhalinyada ciidankiisa ka tirsan faraqa u dhaxeeya?
Madaxa Dooxada Shabelle diinta kaliya ee uu aaminsan yahay waa xabad intaas waxaa u dheer inuu tartan kula jiro Shiikh Shariif oo markasta ku hal qabsado isaga, isagoo leh war ma Shiikh Shariif ayaan ka liitaa oo halganka maxkamadahii ka soo bilaabay kadibna madaxweyne Soomaaliyeed u xuubsiibtay isagoona aaminsan in uu si fiican u garanayo Shiikha oo ay oori walaal ahaayeen marna u ahaa gacan yare sida uu afkiisa ka qirto. waxaasi oo dhan waa wax iska caadi ah maadama uu ku bar baaray colaada oo Soomaaliya ninka qorayga wata yahay rag rag dhalay waqtigiisa ayuu ku jiraa arintaasina ceeb kama ahan Hiiraan iyo Soomaaliyaba waana damac rageed, meelaha qaarkoodna koofurta Soomaaliya dumarka waxaa lagu guursada intaas oo qofood ayaan dilay iyo intaas oo ciidan ayaa ii joogta iyo magaalo hebel anaa ka taliya iyo wax la mida ah.
Laakinse arinta qatarteeda leh waa in uu aduunyada ugu neceb yahay madaxa Dooxada Shabelle labada shey ee ugu qaalisan dunidan aynu ku nool nahay maanta oo hadii uu midkood qaadan lahaa ay wax badan u hagaagi lahaayeen.
1- Ma jecla qof ka aqoon badan oo isaga haga amaba la taliya oo wax la toos toosiya, ileen maskaxda kaa maqan walaalkaa ayey ku jirtaaye maadama uu sheganayo madaxweyne maamul goboleed uuna doonayo inuu hogamiyo ku dhawaan 1.5 Million reer Hiiraan ah.
2- Waxuu aqoon yahanka ka sii neceb yahay waxgaradka markey yiraahdaan war maandhow waxaani nooma roona ee ka joog waxuu arinta u bedelayaa qabiil hadii uu odeygaas yahay shaqsi ay daacad ka aheyd waanada waxuu la korayaa meel aysan arinta joogin oo waxuu leeyahay waxaad neceb tahay reer hebel isagoo markaasi carabka ku dhufunayo hadba qofkaas la hadlayo qoladiisa amaba jifadiisa kadibna waxey noqotay in waxgaradka qaarkii maanta isagoo ku sugan Belet Weyne aysan u tagin amaba talo ku darsan.
Laakinse dhalinyada ciidanka u ah ee uu hogaaminayo fikir kaas ka duwan ayey qabaan iyagu waxey doonayaan mustaqbal iyo iney sinabad ah ugu noolaadaan magaalooyinka waaweyn ee Hiiraan oo ay uga dhaarteen kooxda Shabaab iney si xor ah ugu noolaadaan waxeyna markasta taageeraan waxii naftooda iyo reer Hiiraan u dan ah waana ka dhab iney Hiiraan xoreeyaan oo ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda.
Taageerayaal ma leeyahiin maamulka Doxada shabelle ay wax ka maqlaan?
Xaqiiqadii ma jirto wax taageero ah oo ay kooxdu heysato amaba beel gaar ah ay ka helaan ama reer Hiiraan.waa dhici kartaa mararka qarkood in qaab ay ka muuqato xamaasad qaab jifo hoosaad ay shaqsiyaad ku taageeraan iyagoo waliba markaad dhex joogto magaalada Belet Weyne gudaheeda ay marar qaarkood dhegahaadu maqlayaan iyadoo la leeyahay dowlada reer hebel waliba carabka lagu balaarinayo mid ka mid ah jifooyinka ay ka kooban tahay beel ka mid ah beelaha dego Hiiraan.Marka gudaha laga soo tago qurbaha taageero kuma heystaan waxaana dhif iyo naadir ah in laga helo dibada 5 qofood oo kala qabiil ah oo mamaulkaas taagersan oo reer Hiiraan ah.
Siyaasad ahaan yey ku tiirsan yahiin Dooxada Shabelle?
Hadaanu isku dayno dhinaca siyaasada uma sameysna amaba ma ahan koox u dhisan qaab dowlad goboleed lagu gaari karo maamul wanaagsan oo isku xiri kara reer Hiiraan kadibna lagu soo dhaweyn karo Soomaaliweyn. waxeyna ku tiirsan yahiin labo ka mid ah saraakiisha dowlada Ethiopia oo ay laaluush bareen siweyna magacyadooda looga yaqaano gudaha Hiiraan hadana ku saacida fowdada ay ka wadaan magaalada Belet Weyne maadama lacag waalan oo laga qaaday shacabka ku safra gudaha Hiiraan la siin jiray iyadoona saraakiishaas ay mar dhaw banaanka u soo bixi doonaan oo ay dowlada Ethiopia maqli doonaan howlaha ay faraha kula jiraan xitaa hadii aanu hada dib u dhigno shegitaankooda.
Si kastaba waan dareemi karaa iney qoraalkaan ay dhibsan doonaan shaqsiyaad madaxa Dooxada Shabelle ku taageera qaab qabiil oo aan lagu gaareyn nidaam iyo kala danbeyn balse qarnigan 21aad ma ahan in xaqiiqada leyska indha tiro, sida uu hada ku socdana hadey xaalada sii ahaatane waxey u muuqataa in halganka iyo dagaaladii ay isaga iyo inta aaminsan la galeen argagixisada ay noqon doonaan hal bacaad lagu lisay, waayo halgan aan maskax wadan waxuu ku danbeeyaa wax aan la sheegi karin sida laga dhaxlay kooxdii USC iyo caruurtii ay bar baarisay oo aanu hada aragno ficiladooda.
Su'aasha ugu danbeysa waa (for how long) ayey Dooxada Sahbelle sii jiri kartaa?
· admin on January 14 2012 08:47:07 · 0 Comments · 2491 Reads ·
14,569,296 unique visits